Outlook Paswọdu Iweghachite Ngwá Ọrụ. PST Paswọdu Iweghachite Software.
DataNumen Outlook Password Recovery bụ ngwá ọrụ dị ike iji naghachi paswọọdụ site na faịlụ Outlook PST ezoro ezo. Ọ bụrụ na ịchefu paswọọdụ nke faịlụ PST ezoro ezo, mgbe ahụ na ngwaọrụ a, ị nwere ike iweghachite paswọọdụ ma nweta ọdịnaya dị na faịlụ PST.
4.90 / 5 (site na 1,585 votes)
Gịnị mere DataNumen Outlook Password Recovery?
Mmemme dị mma, yana nkwado ndị ahịa mara mma (n'etiti ndị ahịa ahịa kachasị mma m nwetagoro).
M na-eji Outlook 2010 eme ihe ikpeazụ m
Anọ m na-eji Outlook 2010 na kọmputa m ikpeazụ, nke na-agba Windows 7. Kọmputa ahụ nwụrụ, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma, m na-akwado faịlụ m niile (gụnyere faịlụ Outlook pst) na mpụta mpụga. Mana echefuru m paswọọdụ maka faịlụ pst ezoro ezo nke nwere 14.5 GB nke email na mgbakwunye (ihe dị ka afọ asaa nke email, ụfọdụ n'ime ha dị m ezigbo mkpa).
M ebudatara ikpe version nke DataNumen Outlook Password Recovery (a ghara ihie ụzọ na mmezi Outlook ma ọ bụ mgbake Outlook) na starUsoro mgbake ahụ, ma kagbuo ọrụ ahụ mgbe ọ malitere ka m nwee ike i copyomi faịlụ pst ezoro ezo gaa ebe dị iche iji jide n'aka na m nwere nkwado ndabere (echefuru na m nwere nkwado ndabere na ndekọ ndekọ faịlụ m Outlook). Mgbe nke ahụ gasịrị, enweghị m ike iji ụdị nnwale ọzọ.
Azụrụ m ụdị zuru ezu, mana ọ nweghị ụzọ m ga-esi tinye ID na njirimara onye ọrụ m na ụdị nnwale ahụ maka ntuziaka iji gbanwee ụdị nnwale ahụ na ụdị zuru ezu. Ya mere emelitere m DataNumen. N’ime ihe dị ka awa iri na abụọ, ha zipụrụ m njikọ njikọ maka ụdị nke zuru ezu, ma gwa m ka m wepu ụdị nnwale ahụ wee wụnye ya.
Enweghị m nsogbu iwepu ikpe mbipute na wụnye full version (mbipute 1.2.1.0), na ngwa ngwa nwetara a paswọọdụ iji nweta ezoro ezo pst faịlụ.
M gara rụwa ọrụ ahụ ọzọ ka m hụ oge o were. Usoro ihe omume decrypted m pst faịlụ na otu nkeji na 47 sekọnd.
Na mberede, ọtụtụ faịlụ pst ndị ọzọ na ndekọ ndekọ faịlụ Outlook m, dịka faịlụ echekwara, ezighi ezo. Enweghị m ike icheta otu m siri zoo na pst file a. You kwesịrị ị na-eji ikpe mbipute (ị ga-esi jiri ya otu ugboro) iji jide n'aka na pst faịlụ ịkwesịrị ịnweta bụ ezoro ezo.
Ikpeazụ banyere: M enweghị echiche ma ikpe mbipute ga-decrypted a pst faịlụ dị ka nnukwu dị ka nke a, ma ọ bụ ma file size bụ adịghị mkpa maka ikpe version.
Ihe omume a bu ihe nzoputa, ma nkwado ndi ahia di nma (10 na onu ahia nke 1 rue 10). Enwetara m ihe dị ka afọ asaa nke email. Nkwenye!
Ejiri m 5 awa taa na-achọ ebe nrụọrụ weebụ na-enye nkwụghachi ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ Outlook Password. Emechara m chọta DataNumen nke ahụ zuru oke
Ejiri m 5 awa taa na-achọ ebe nrụọrụ weebụ na-enye nkwụghachi ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ Outlook Password. Emechara m chọta DataNumen nke ahụ dabara n'ụzọ zuru oke maka ụgwọ otu oge m chọrọ! Mfe iji ma rụọ ọrụ dị ka amara. Daalụ maka ịkwụsị oge m nwere nkụda mmụọ!
Dị nnọọ na-agbalị gị .pst paswọọdụ mgbake.
Na-arụ ọrụ nke ọma.
Ga-edebanye aha na weebụsaịtị gị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta nke ọ bụla
Ga-edebe weebụsaịtị gị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta ngwọta ọ bụla ị nyere.
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Kwado Microsoft Outlook 97 na 2019 na Outlook maka Office 365 ezoro ezo faịlụ PST.
Nkwado iji nwetaghachi okwuntughe maka ogbe nke ezoro ezo PST faịlụ.
Ejikọtara ya na shei Windows, n'ihi ya ị nwere ike iweghachite paswọọdụ maka faịlụ PST ezoro ezo na gburugburu (aka nri) menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen Outlook Password Recovery iji naghachi okwuntughe si faịlụ ezoro ezo nke Outlook PST
Mgbe PST faịlụ gị ezoro ezo ma chefuo paswọọdụ ya, ịnwere ike iji ya DataNumen Outlook Password Recovery i scanomi PST faịlụ na-agbake paswọọdụ.
Cheta na: Tupu agbake paswọọdụ si ezoro ezo Outlook PST faịlụ na DataNumen Outlook Password Recovery, biko mechie ngwa ndị ọzọ ọ bụla nwere ike gbanwee faịlụ PST.
Họrọ ezoro ezo Outlook PST faịlụ onye paswọọdụ ga-natara:
Can nwere ike itinye aha faịlụ PST ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta faịlụ PST ezoro ezo na kọmputa mpaghara.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Password Recovery ga start na-enyocha ma na-agbake paswọọdụ maka faịlụ PST ezoro ezo. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mgbake ahụ, ọ bụrụ na paswọọdụ dị na faịlụ PST ezoro ezo nwere ike weghachite nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a ị nwere ike pịa bọtịnụ iji detuo paswọọdụ na desktọọpụ, wee jiri ya mepee ma nweta faịlụ PST ezoro ezo na Outlook.
Cheta na: Okwuntughe nwere ike ọ gaghị abụ nke ị jiri, mana ọ nwere ike mepee faịlụ PST ezoro ezo n'enweghị nsogbu ọ bụla.
DataNumen Outlook Password Recovery A na-ahapụ 1.2 na November 9th, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery A tọhapụrụ 1.1 na June 17, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 weputara na October 20th, 2014
Na-akwado Microsoft Outlook 97 na 2016 ezoro ezo faịlụ PST.
Nweta lost Data Outlook, tinyere ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ sitere na diski ma ọ bụ draịva
Naghachi ozi na ihe ndị ọzọ site na ụmụ mgbei ma ọ bụ mebiri emebi Microsoft Exchange offline nchekwa faịlụ (.ost)